Xog sir ku aadan qaraxyada Muqdisho ee u danbeeyay! – Hornafrik Media Network
Xog sir ku aadan qaraxyada Muqdisho ee u danbeeyay!
By Liibaan Nuur	 On Sep 16, 2018
HornAfrik- Waxaa warar isa soo taraya ay yihiin xogo ku aadan qaraxyadi ugu danbeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho sida kii xalay lagu dhawacay Xildhibaan Maxamed Boorow iyo xarumaha degmooyinka Howlwadaag iyo Hodon.
dhamaan weeraradan ayaa ah kuwo walaac laga muujinayo in ay tusaale u yihiin amni darri ka jirta Muqdisho ,
weerarki ka dhacay xarunta degmada Hodan ee ay dad badan ku dhinteen ayaa Gudoomiye ku xigeenka arimaha bulshada ee Gobolka Banaadir Basma Caamir oo kahadashay waxa ay tiri “Qaraxyada ka dhaca magaaladan waxaa lagu sameeyaa gudaha magalaad , kii degmada Hodan waxaa lagu diyaariyay gudaha degmada”
Sidoo kale maalmo kahor shir jaraa’id oo uu Muqdisho ku qabtay Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha Hirshabeele ayaa waxaa uu sheegay in halis badan ay ka jirto xaaladda amaan ee Muqdisho , amnigana uu faraha ka baxay isagoona digniin ah in ay is ilaaliyaan u diray xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya.
Madaxweyne ku xigeenka Galmudug oo qarka u saaran in isna xilka laga qaado.
Senataro Garoowe u tagay xal u raadinta Khilaafka D/Dhexe iyo M/Goboleedyada.